Voka-pitilian’ny Institut Pasteur naverina, ‘cas contact’ mitombo isa, ‘essai clinique’ amin’ny CVO - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitohy hatrany ny fanomezam-baovao isan’andro
amin’ny fampitam-baovaom-panjakana TVM sy RNM
avy eny amin’ny CCO (Centre de commandement opérationnel)
momba ny ady amin’ny tsimokaretina ‘coronavirus’
ary raisin’ireo televiziona sy radio tsy miankina.
Fa nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao
tamin’iny herinandro iny ny tarehimarika tsy mitovy
navoakan’ny CCO sy ny an’ny OMS, 35 ny an’ny CCO raha 67 ny an’ny OMS.
Naverina notiliana indray moa ireo olona ireo
taorian’ny kabarin’ny filoha Rajoelina tany Toamasina tamin’ny 7 mey,
ary naneho ny fahatezerany mihitsy izy
noho ny tsy fitandremana sy tsy fanarahan’ny olona
ny fepetra fisorohana ka nampitombo ireo tratry ny tsimokaretina
avy amin’ny ‘cas contact’.
Nitondra fanazavana momba izany ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle,
mpitondra teny ofisialy momba ity covid-19 ity, tamin’ny alahady 10 mey fa ho azo amin’ny alarobia (13 mey) ny vokatry ny fitiliana ireo olona ireo izay vao naverina ny fanaovana azy. Fantatra koa fa nisy ny fampiantsoan’ny fitondram-panjakana ny tompon’andraikitry ny Intsitut Pasteur de Madagascar momba ity voka-pitiliana ity. Nambaran’ny Profesora Vololontiana tamin’io alahady 10 mey io fa 171 ny tranga voamarina hatramin’ny 19 marsa nanaovana fitiliana, 104 no sitrana, 68 arahi-maso ary 4481 ny fitiliana vita hatramin’ny 8 mey.
TTF : toy izao izany vokatrny famerenana ny fitiliana nampanaovn’ny Praiminisitra
Voarain'Atoa Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta ny harivan'ny alarobia 13 May 2020 teo ny tatitry ny fanadihadiana, izay nahitana ireto tarehimarika manaraka ireto:
- 67 ireo fitiliana naverina, ny 55 tamin'ireo no efa voakirakira fa ny 11 kosa tsy maintsy naverina noho ny tsy fetezana nandritra ny fitiliana, ny 1 kosa dia ilay fitiliana niiba taorian'ny fahafatesan'ilay vehivavy nanana olan'ny voa (test post-mortem négatif).
- Tamin'ireo 55 efa voakirakira dia 5 ihany no hita fa mitondra ny tsimok'aretina (cas positifs).
Ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana ihany dia mitondra fanazavana hatrany momba ny CVO ireo manam-pahaizana amin’ny fahasalamana, alefa amin’ny TVM sy RNM ary ireo televiziona sy radio tsy miankina. Tamin’ny 8 mey teo dia mbola naverin’ny Profesora Rafatro Herintsoa, mpahay fanafody momba ny raokandrom-pianakaviana, fa tsy mbola nahazo ny atao hoe AMM (Autorisation de mise sur le marché) na fahazoana alalana amin’ny famarotana azy amin’ny tsena ny CVO fa nomen’ny fanjakana kosa ‘autorisation temporaire de vente’ na fahazoan-dalana vonjimaika amin’ny famarotana. Ary ‘remède traditionnel amélioré’ no sokajy misy azy. Ankoatra izany dia manantitrantitra hatrany ireo manam-pahaizana miteny ny maha zava-dehibe ny fanarahana ny fihetsika fototra isorohana ny fahazoana ny tsimokaretina, amin’ny fanasana tanana amin’ny rano sy savony na ‘gel désinfectant’ sy fanaovana aro vava sy orona na ‘masque’, ary ny fanajana ny elanelana iray metatra eo amin’ny olona mifamoivoy.
Manodidina ny ady amin’ny covid-19 ihany, dia nitafa tamin’ny mpanao gazety ao amin’ny RFI sy France 24 ny filoha Rajoelina tamin’ny 11 mey teo, tamin’ny alalan’ny ‘visioconférence’ araka ny nampitana izany tamin’ny TVM, ary nampitain’ny fampitam-baovao tsy miankina eto amintsika ihany koa. Anisan’ny nitondrany fanazavana ny tambavy CVO hitan’ny IMRA sy ny ‘essai clinique’ nambaran’ny filoha fa hatao. Teo ihany koa ny porofo nangatahan’ny Firaisambe afrikanina sy ny CEDEAO ary ny OMS. Nohamafisin’ny filoha fa mahasitrana sy miaro io CVO io, ary arahina ny ‘protocole’ amin’ny fampiasana azy. Nambaran’ny filoha Rajoelina ihany koa fa famerenana ireo ‘îles éparses’ no takian’i Madagasikara fa tsy fiaraha-mitantana raha nanontaniana momba ireo nosy efatra manodidina an’i Madagasikara izy.
Mbola nitohy ny fanarahana fotoam-bavaka tamin’ny haino aman-jery noho ny tsy mbola fisokafan’ny Fiangonana rehetra tamin’ny alahady 10 mey teo. Ho an’ny EKAR dia niainga hatrany tao amin’ny katedraly Andohalo ny lamesa tsy natrehan’ny mpino fa nampitaina tamin’ny radio sy televiziona IBC, notarihin’i Mgr Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy ao amin’ny diosezin’Antananarivo. Nasongadin’ny eveka tamin’ny fifampizarana nataony tamin’ny toriteny ny maha zava-dehibe ny vavaka sy ny finoana tsy afa-misaraka, ary nentiny am-bavaka ihany koa ny hahafongotra ny tazomoka izay mamely ankehitriny. Ny FFKM notarihin’ireo filoham-piangonana mandrafitra azy dia nanao ihany koa fiaraha-mivavaka ao anatin’izao fotoana iadiana amin’ny fihanaky ny tsimokaretina ‘coronavirus’ izao tao amin’ny katedraly Andohalo, nampitaina tamin’ny TVM sy RNM ary haino aman-jery tsy miankina sasany. Nanentana tamin’ny hira ny chorale avy amin’ny EKAR Ambohipo. Ny Radio Don Bosco (RDB) moa dia efa manao izany isan’alahady na tsy mbola nisy aza ny ady amin’ity areti-mandoza ity.
Manomboka miala miandalana amin’ny fihibohana ny firenena maro, ny 11 mey ny any Frantsa. Tsikaritra manko fa efa manomboka mihena ny isan’ny mamoy aina isan’andro na dia mbola miakatra aza ny isan’ny tratran’ny tsimokretina sy namoy aina.
Maherin’ny 4 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina tamin’ny 11 mey teo raha maherin’ny 3,5 tapitrisa izany tamin’ny 4 mey, ary manakaiky ny 280 000 ireo namoy ny ainy (maherin’ny 248 000 tamin’ny 4 mey). Ho an’i Madagasikara, ny tranga tratry ny tsimokaretina nambara hatramin’ny 12 mey dia 192, miisa 107 no sitrana ary 85 manaraka fitsaboana. Tsikaritra ho nitombo isa ireto tratry ny tsimokaretina tamin’ity herinandro ity.
Momba ny fahasalamana ihany, fantatra fa mamely mafy ny tazomoka sy ny ‘dengue’ amin’ny faritra sasany eto amin’ny Nosy, raha ny ampitain’ny haino aman-jery samihafa. Nambaran’ny depiote Nicolas Randrianasolo, ohatra, fa maherin’ny 80 no namoy ny ainy any amin’ny distrikan’i Betroka misy azy. An’arivony kosa ireo tratry ny ‘dengue’ any amin’ny faritra Boeny.